Tuesday June 12, 2018 - 14:10:16 in Wararka by Super Admin
Afarta waddo ee ugu weyn Muqdisho ayaa xiran oo waxaa lagu gooyay dhagxaan iyo boqolaal maleeshiyaad ah, kumanaan shacab ah ayaa ku xayiran guryahooda mana awoodaan in ay adeegyo udoontaan suuqyada waaweyn sida Bakaaraha, Suuq Bacaad iyo Xamarweyne.
Waddooyinka suuqa Bakaaraha ayaa ah kuwa haawanaya waxaana si gaabis ah ku socda ganacsiga suuqan oo ah midka ugu weyn dalka Soomaaliya,
iyadoo ay soo dhowdahay munaasabadda Ciiddul Fidriga ayay shacabku awoodi waayeen in ay soo adeegtaan, maleeshiyaadka loogu magac daray 'Xasilinta Caasimadda' oo si toos ah u hoos taga Xasan Cali Kheyre ayaa gabood fallada geysanaya.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in uu jiro khilaaf u dhaxeeyo saraakiisha Farmaajo iyo Kheyre oo ku aaddan furidda waddooyinka, saraakiisha hoostagta Kheyre ayaa diidan in lafuro waddooyinka halka lataliyayaasha dhanka amniga ee Farmaajo ay doonayaan in waddooyinka lafuro.
Xildhibaan Cabdi Wali Max'med Qanyare ayaa qoraal uu ku faafiyay baraha bulshada bulshada ku sheegay in xadgudub daran lagu hayo shacabka Muqdisho.
Wariyaal iyo aqoonyahanno ayaa iyana sheegay in Muqdisho ay ku socoto dhabbihii magaalada Ghaza ee dhulka Filasdiin oo go'doomin daran daran ka wajaheysa Yahuudda, baraha bulshada ayay dadku ku faafinayaan aragtiyadooda ku aaddan dhibaatada dhanka ammaanka ah ee kajirta magaalada Muqdisho.
Dad kale ayaa xaalka magaalada Muqdisho lameel dhigaya magaalooyinka Baqdaad iyo Kaabuul oo ciidamada Mareykanka ay waddooyinka dhagxaan waaweyn ku jareen.
Sidaas oo waddooyinka caasimadda loo xiray hadane ammaanku ma sugna oo dilal qorsheysan ayaa si xowlli ah uga socda degmooyinka gobolka Banaadir waxaana dilalkaas lala beegsanayaan askar iyo saraakiil katirsan dowladda Federaalka.